विदेश: रूस लागि देशहरूको सूचीमा
वैश्विक रंगशालामा 251 देश प्रतिनिधित्व छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै इलाका, को अधिकारीहरु र जनसंख्या छ। तिनीहरूलाई संरचना गर्न, धेरै वर्गीकरण भए। उदाहरणका लागि, कुनै पनि विशेष अवस्थामा आदर संग वर्गीकरण विदेश देश र दुनिया को एक भाग हुन सक्छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक सान्दर्भिक छन् देशहरूको सूचीमा यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।
निकट र टाढा विदेश के हो
टाढा र विदेश नजिकै सर्तहरू रूस मा सोभियत संघ को पूर्ण पतन पछि देखा पर्नुभयो। पूर्व रूस नजिक सम्बन्ध छैन भनेर ती राज्य समावेश गर्नुहोस्। पनि सामान्यतया ती एक समावेश छैन स्वतन्त्र राज्य को कमनवेल्थ।
टाढा विदेश के बुझ्न क्रम मा, स्पष्ट छ, र विदेश निकट समावेश छन् के आधारमा के देश बुझ्न आवश्यक छ। वास्तवमा, "छिमेकी" एक पटक सोभियत संघ को भाग थिए, र 1992 पछि यो बाहिर आए ती देशहरूमा छन्।
यी नाम अनौपचारिक र अक्सर विदेशी प्रेस मा उद्धरण लेखिएको छ छन्। रूस लागि, यो संग लगातार संचार को एक गहिरो स्मृति छ को सोभियत संघ को पूर्व देशहरूमा। शब्द को प्रकृति देशहरूको भौगोलिक remoteness कुनै सम्बन्ध छ। सबै उहाँले राजनीतिक र ऐतिहासिक महत्त्व को पहिलो।
रूस (देशहरूको सूचीमा) सम्म विदेश
यो वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित देशहरूको सूचीमा, देशहरूको एकदम धेरै समावेश। सम्झना दीर्घकालीन रूसी विदेशी देशहरूको सूचीमा गर्न, brightest व्यक्तिहरूलाई चयन गर्नुहोस्। नोट को पनि देशहरूमा बीच सहयोग को स्तर छ। रूसी दीर्घकालीन विदेशी देशहरूको सूचीमा प्रदान गरिएको छ तल:
चीन - रूस को सबै भन्दा ठूलो व्यापार र आर्थिक साझेदार मध्ये एक।
भारत - संसारमा एक विकास किनमेल केन्द्र।
युरोपेली संघ - लगानीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत।
जापान र कोरिया - महत्त्वपूर्ण प्रविधिहरू स्रोत।
ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन - प्राकृतिक र कृषि स्रोतहरू विभिन्न स्रोत।
मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका - रूसी उपकरण को आयातका लागि एक ठूलो बजार।
विदेशी देशहरूको सूचीमा कहिलेकाहीं पनि बाल्टिक अमेरिका समावेश गर्नुहोस्। तर यो एक अपवाद बरु हुन सक्छ। फिनल्याण्ड, पोल्याण्ड, नर्वे, चीन र DPRK संग साधारण सीमाना बावजुद, रूस गैर-सीआईएस देशहरुमा सूचीमा राज्य डेटा समावेश गर्दछ।
निकट विदेश देशहरूमा द्वारा धेरै कम बोक्न।4विभाग मा उनलाई विभाजित। पहिलो - को बाल्टिक देशहरूमा छ। यी लिथुआनिया, लाटभिया र इस्टोनिया समावेश गर्नुहोस्। दोस्रो ब्लक - यो पूर्वी युरोपेली देश। तेस्रो यस वर्गमा समावेश छन् को काकेशस देशहरूमा। र मध्य एशिया को क्षेत्रहरु को सूची पूरा।
रूस र चीन बीचको सम्बन्ध
विदेशी देशहरूको सूचीमा चीन सुरु गर्नुपर्छ। यो देश संग रूसी विदेशी आर्थिक सम्बन्ध लागि प्राथमिकता हो। निम्नानुसार दुई देशहरू बीच सहयोग को मुख्य उद्देश्य हो:
घरेलू उत्पादन को चिनियाँ बजार मशीनरी मा निष्कर्ष।
कृषि को सम्बन्ध मा निर्यात नीति विकास।
चिनियाँ गर्न बाधा को उन्मूलन गर्ने दूरसंचार क्षेत्र र रासायनिक उद्योग को उत्पादन बजार।
दुई देशहरू बीच सीमा क्षेत्रमा विकास लगानी।
अनुसन्धान र विकास सहयोग।
यी क्षेत्रमा काम सम्भव सीआईएस देशहरुमा बीच मैत्री सम्बन्ध बलियो बनाउन बनाउँछ। सम्भव क्षेत्रको सूची जो रूस र चीन बीच परस्पर लाभदायी सहयोग को विकास को गतिशीलता देखाउँछ, लगातार विस्तार।
भारत र रूस
छैन संयोगले गैर-सीआईएस देशहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा, भारत ओगटेको छ। रूस र भारत बीच सहयोग को मुख्य क्षेत्रहरु जैव र जानकारी उद्योग छन्। रूसी संघ को देशहरुमा बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन भारतीय बजार मा यसको कभरेज विस्तार गर्न योजना। मुख्य निर्यात वस्तुहरु बसें फलाम र, गैर-फलाम धातु र ईन्जिनियरिङ् उत्पादनहरू हुन्। अमेरिका बीच लगानी परियोजनाहरूको विकास दबाइ, तेल र ग्याँस कम्पनीहरु असर गर्छ। नजिक सह-अपरेसन सामान आन्दोलन को निर्यात र आयातका लागि सहज परिवहन गलियारों प्रदान गर्नुपर्छ। रूस र भारत बीच बाह्य आर्थिक सहयोग मा धेरै ध्यान ऊर्जा, जैव र वैमानिकी छ।
रूसी निर्यात र आयात प्रमुख शेयर युरोपेली संघ अमेरिका मा आवश्यक छ। त्यसैले, यो आदरणीय तेस्रो स्थानमा सूचीमा पश्चिमी देशहरूको उपस्थिति स्पष्ट छ। ईयू को सम्बन्ध मा रूस को मुख्य कार्य लगानीको उचित राशि, आफ्नो प्रविधिहरू र व्यापार प्रक्रिया को आफ्नो उत्पादन को परिचय हुँदैछ। रूस र यूरोपीय संघ को देशहरुमा बीचको सम्बन्ध विकास को प्राथमिकता निर्देशन सूची निम्न गतिविधिहरु समावेश:
युरोपेली बजार रूस देखि हाइड्रोकार्बन आपूर्ति को एक स्थिर शासन को गठन।
आपसी लगानी अवस्था तेल र ग्यास उत्पादन विकास, साथै आफ्नो वितरण र यातायात मा निर्माण।
घरेलू र युरोपेली कम्पनीहरु परस्पर लाभदायी साँठगाँठ बीच निष्कर्षमा मार्फत औद्योगिक सहयोग को आकार मा वृद्धि। यो क्षेत्र को मुख्य उद्योग हो: दूरसञ्चार, मोटर वाहन, खाद्य उद्योग।
दुई देशहरू बीच वैज्ञानिक र प्राविधिक सहयोग बढेको ब्याज।
को वित्तीय र विकास परियोजनामा द्विपक्षीय लगानी स्थापना।
गतिशीलता सुधार र नागरिक को क्रस-बोर्डर आन्दोलन सुविधा बाहिर काम पूरा। यो पनि सामान र बौद्धिक सम्पत्ति को परिवहन लागू हुन्छ।
कि युरोपेली बजार रूसी निर्यात को पाठ्यक्रम मा उत्पन्न बाधा हटाइ।
माथि प्रस्तुत रूस र युरोपेली संघ को देशहरुमा सक्षम हुनेछ वैश्विक बजार मा परस्पर लाभदायी साझेदार बन्ने उपायहरूको कार्यान्वयन। आज यी देशहरूमा सक्रिय छैन सीमा क्षेत्रमा विकास गर्न ध्यान भूल, उहाँलाई अघि सेट लक्ष्य प्राप्त गर्न मा संलग्न छन्।
ठाँउ Gagarina यू। ए अवतरण
संसारको सबैभन्दा सुन्दर पुल: एक फोटो र नाम। शीर्ष 10
स्वीडेन बारेमा सबैभन्दा रोचक तथ्य। स्वीडेन - बच्चाहरु को लागि रोचक तथ्य
काई bogs: सुविधा र मुख्य विशेषताहरु
"Abalak क्षेत्र" - साइबेरिया मा ऐतिहासिक पुनर्निर्माण को मुख्य पर्व!
Sevastopol अधिकांश क्षेत्रमा
नुस्खा फोटो संग पानी मा sticks
प्रेस लागि प्रभावकारी अभ्यास, र त्यो घर मा प्रदर्शन गर्न सक्छन्
प्रोक्सी सर्भर आसान क्यास कसरी कन्फिगर गर्न?
संघ - यो के हो? रूस को व्यापार यूनियन। व्यापार यूनियन ऐन
हुक्का र आफ्नो सुविधाहरू लागि सुर्ती को प्रकार
केमेरोभो सर्कस, यसको इतिहास, रोचक तथ्य Familiarity
महामण्डल पानी राज्य - गुण उदाहरण
राख्न कसरी घर मा लसुन को जाडो अवधिमा
व्यापार र यसको विकास संगठनात्मक संरचना
लगानी परियोजनाहरूको विश्लेषण: निर्देशन
एस पि सी "EPL हीरा": ग्राहक समीक्षा, इतिहास, सुविधा र दायरा